Allgedo.com » 2012 » October » 16
Home » Archive Daily October 16th, 2012
Ilma adeerayaalow Cali Raage hakaraacina Nabiga Ilaahey – By Adam Abuzuhri
Assalaamu alaykum. Waad salaamantihiin dhamaan walaalaha qeymaha badan ee ku xiran websitekan qaayaha badan. By Adam Abdi Abuzuhri abuzuhri1@gmail.com —————————– Maanta iyo maqaalkeena, wuxuu kusaabsanyahay hadal aan ka soo xigtey Sheekha Soomaaliyeed ee caanka ah Sheekh Maxamuud shibilli ee kusugan magaalada Nairobi, mar aan tagay masjid...
Xildhibaan diiday Maamulkii KMG ahaa ee looga dhawaaqay Kismaayo
Dhawaan Magaaladda Kismaayo waxaa lagu dhisay Maamul KMG ah kaas oo ka kooban 12 xubnood. Gudoomiyaha Maamulkaas ayaa waxaa laga dhigay Axmed Madoobe halka sidoo kale uu leeyahay labo kuxigeen, madaxa amniga magaaladda, kan dekadda iyo kan arimaha bulshada ayaa sidoo kale la magacaabay. Hadaba Xildhibaan Khaliif Maxamed Xaaji oo kamid ah Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda Jubooyinka...
Madaxweyne Xasan Sh iyo Ra’isul Wasaare Dr Saacid oo kulamo siyaasadeed ka wada Muqdisho
Xili maalinta beri ah lagu wado in Ra’isul wasaaraha dowlada Soomaaliya Dr C/Faarax Shiikh-doon uu hortagayo barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa magaaladda Caasimadda ah ka soconaya kulamo gooni gooni ah. Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Pro Xasan Sh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay la lahaa xildhibaano katirsan barlamaanka Soomaaliya kuwaas oo uu ku boorinayo in ay ansixiyaan...
Dooni kusoo xiratay Kismaayo iyo amaanka oo si weyn loo adkeeyay
Amaanka Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoona mudo kadib ay kusoo xiratay dooni ganacsi. Doonidan oo uraran ganacsato Soomaaliyed ayaa sida Bagaash iyo waxyaabo kale, waxaana soconaya dajinta qalabka ay sido doonida. Sargaal katirsan Maamulka KMG ah ee dekadda Kismaayo ayaa AOL usheegay in dekadan oo ah mid ganacsi ay noqonayso tii ugu horeeyay tan iyo markii...
Xukumada watigeedu dhamaanayo oo sheegtay in Maamul loo dhan yahay loo samaynayo Kismaayo
Xukumadda uu waqtigeedu sii dhamaanayo ayaa markii ugu horeyay kahadashay howlgaladii lagu qabtay Magaaladda Kismaayo iyo maamul usamaynteeda. Ra’isul Wasaare kuxigeenka xukumada Dr Gaas ahna Wasiirka Ganacsiga C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa uga mahadceliyay ciidamada Militeriga Kenya iyo kuwa dowlada Soomaaliya qabashadii Magaaladaas. Waxaa uu kutilmaamay in ay tahay magaalo dhaqaalo...
Roobab mahiigaan ah oo biyo dhigay Magaaladda Gaalkacyo
Magaaladda Gaalkacyo iyo deegaano kale oo kuyaal bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka da’ayay roobab mahiigaan ah kuwaas oo biyo dhigay deegaano badan oo dalka katirsan. Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in roobabka ay miyo dhigeen gudaha magaaladda iyo dhulka miyiga ah. Wariye madax-banaan oo kusugan Magaaladda Gaalkacyo ayaa...
Abaabulo kadhan ah Shabaab oo ka soconaya gobolka Hiiraan
Waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ka soconaya abaabulo dagaal oo kadhan ah Kooxda Shabaab. Abaabuladan ayaa waxaa si wadajir ah uwada ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee Amisom. Sida uu sheegay Axmed Cismaan Axmed Inji oo ah gudoomiye kuxigeenka gobolka Hiiraan waxaa ciidamada ay doonayaan in ay ka dhaqaaqaan Magaaladda Beledweyne iyagoo aadaya dhanka degmooyinka ay Shabaab...